DEG DEG-Ciidamo gedoodsan oo la wareegey qaybo kamid ah Boosaaso
Ciidank hubaysan oo ka tirsan Puntland, ayaa saaka waxa ay la wareegeen xarunta Wasaaradda Kalluumeysiga Puntland ay ku leedahay Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Qaar kamid ah ciidankaasi ayaa sheegay inay ka cabanayaan kadib markii ay waayeen xaquuq loo ballan-qaaday, xilli loo diray hawlgal la xiriira la-dagaallanka Maraakiibta Jariifka ah ee Xeebaha Puntland.
Wasaaradda waxaaakujira mas’uuliyiin ay kamid yihiin Wasiir ku xigeenka Kalluumeysiga iyo Agaasimaha guud ee wasaaraddaas, kuwaas oo ciidanku diideen in ay ka baxaan Xarunta.
Nimco Gaylan says:
Ina Gaylanoow waxaa tahay masiibo loo soo diray in magaca laga xumeeyo Puntland. Af xumadaada iyo beentaada Puntland u dhutinmayso. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ”sagaaro bad ku kaadisay naceeda ayey ku tustay ”. Marka dhuusada iyo beenta iska sii buufi inta lagaa xirayo.
KKK War waa been anaa hadda la hadlay oowaxba akama jiraan ee yaan waqti layskaga luminin.